Ndị na-eke Welding Wire - China na-ebugharị Wresing & Factory
Igwe eji mkpuchi plastik
Mesh ọla Mesh
Mesh Welded nke Welded
Mgbasawanye Mpempe Metal
Ngwunye Mgba ọkụ Welded
Ntu ahụ dị nkenke
Udulu gbukwaa ura
Ihe eji eme ihe ọkụ
Gas Shield Arc Welding Wire Er70s-6
Armerged Arc Welding Wire H08mna, Aws.Em12
Igwe anaghị acha mkpuchi mkpuchi Er70s-6n
Onye Isi Ahịa Abrasive
Disc Fla Disc
Wheel siri ike
&B &R & & EGO
Ahia na ugbo
Moto moto na akwara
Bope Mgbakwunye Bope
Emikpu emiri em12
Er70s-6n emeghị ọla kọpa
Co2 Gas Shield Arc Welding Wire
AKW CHKWỌ CHM 08A nwere ike iji waya ịgbadoro waya siri ike maka ịgbado ọkụ na agba. Weld metal mpaghara nwere ezigbo ihe eji emepụta teknụzụ mgbe ejiri mgbakwunye ịgbado ọkụ na-arụ ọrụ. N ’arụ ọrụ dị elu na arụmọrụ dị elu, ike dị ala na obere ọrụ, wdg. APPLICATION A na-eji eriri welding eme ihe maka ihe dị mkpa nke carbon carbon steel na obere alloy steel. Dị ka ndị a na-anya mmiri, ụgbọ mmiri sitere na ọrụ kemịkal na ọdụ ikuku nuklia, akwa ...
Njirimara: Mpụta a nke eriri waya a na-ejighị ọla kọpa gwọọ nsogbu niile emetọ ọla kọpa mepụtara na usoro nke imepụta na iji. Site na itinye usoro pụrụ iche nke anụrị n’elu waya nke ịgbado ọkụ, elu ya na-enwu enwu ma dị ọcha, nguzogide nchara siri ike. Inwe waya n'ụzọ kwụ ọtọ, waya dịkwa mma maka ịgbado ọkụ ogologo oge. Ngwa: A na-ejikarị waya igwe agbadoro na kọlụm, igwe injin, ụgbọ mmiri, ụrọ ...
Ọkọlọtọ: GB ER50-6 AWS ER70S-6 JIS YGW12 Njirimara: ER70S-6 bụ waya ọla kọpa agbadoro dị ala, nke a na-eme na okpuru ikuku CO2 ma ọ bụ ọta argon nke Argon. Ọ nwere ezigbo ịgbado ọkụ; arc siri ike, spatter dị ala, ọdịdị weld mara mma, obere weld pore uche; ezigbo ịgbado ọkụ weldability niile, ịgbado ọkụ ịgbado ọkụ dị ugbu a. Ngwa: Kwesịrị ekwesị ka ọ bụrụ otu ịgbado ọkụ carbon na obere alloy steel nwere ọkwa 500MPa (dịka ndị…
No.375, N'etiti uzo xinshi, Qiaoxi district, Shijiazhuang City, Hebei, China.